Muuse Suudi oo Noqday Xildhibaan Aqalka Sare ee Maamulka Hirshabeele (VIDEO) - Hablaha Media Network
Muuse Suudi oo Noqday Xildhibaan Aqalka Sare ee Maamulka Hirshabeele (VIDEO)
HMN:- Doorashadii aqalka sare ee maanta ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeele ayaa waxaa kursigii sadexaad ku guulaystay Muuse Suudi Yalaxow oo ah mid kamid ah hogaamiye kooxeedyadii dalka soo maray.
Muuse Suudi ayaa helay 91-cod, halka Musharaxa kale ee la tartamayay oo lagu magacaabo Xasan Cali Caadle uu helay 4 cod kaliya.
Waxaa Hoolka ay doorashada ka dhacday maanta soo xaadiray oo codeysay 95 Xildhibaan, Muuse Suudi ayaa helay 91 Cod halka musharixii la tartamayay ee Xasan Cali Caadle isna uu helay 4 Cod sida uu ku dhawaaqy Gudoomiyaha Baarlamaanka HirShabeelle.
Kursigan sadexaad, ayaa aad isha loogu hayay maadaama uu ku tartamayay muuse suudi oo in mudo ah dibedda ka joogay siyaasada Soomaaliya.
Musharxii laga guuleystay ee Xasan Cali Caadle oo isagana markiisa hadlay ayaa ku qancay Natiijada Doorashada wuxuuna u hambalyeeyay Muuse Suudi, waxa uuna xubnaha aqalka sare ugu baaqay in looga baahanyahay iney ka shaqeeyaan sidii loo hormarin lahaa maamulka cusub ee HirShabeelle.